समाचार Archives • raradiodarpan.com
हजुर आमाले नै १४ बर्षे नातिनीलाई यौ-नधन्दामा लगाएपछि….
९ असार, काठमाडौं । अर्घाखाँचीमा गत जेठ १ गते देखि यता एक युवकद्वारा पटक पटक बालिकालाई ब ला त्कारको शिकार बनाउनमा मुख्य सहयोगी ती बालिकाकी हजुर आमा नाता पर्ने एक महिला भएको प्रहरीले खुलासा गरेको छ । सन्धिखर्क नगरपालिकाकी १४ बर्षीया बालिकालाई सितगंगा नगरपालिका–१४...
परपुरुषसँग रंगेहात फेला पारेपछि श्रीमतीको हत्या !
८ असार, काठमाडौं । पूर्वी सिक्किमको साम्लिकमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका एक नेपाली पुरुषले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । आफ्नै घरमा परपुरुषसँग आपत्तिजनक अवस्थामा रंगेहात फेला पारेपछि वीरबहादुर रसाइलीले श्रीमतीको हत्या गरेको नर्थइस्ट टुडेले जनाएको छ । रसाइलीले आफ्नी पत्नी ३५ वर्षीया लक्ष्मी...
विमानस्थलमा एक महिनादेखि उडान अवरुद्ध
५ असार, जनकपुर । ताप्लेजुङको एकमात्र सुकेटार विमानस्थलमा एक महिनादेखि उडान अवरुद्ध बनेको छ । निरन्तर वर्षा र तुँवालोले गर्दा हवाई उडान अवरुद्ध हुँदै आएको हो । बाक्लो तुँवालो र निरन्तर वर्षाका कारण उडान अवरुद्ध हुन पुगेको नेपाल वायुसेवा निगम ताप्लेजुङका स्टेशन इन्चार्ज लोकेन्द्र...
123 … 91 पछिल्ला »